Ukutshabalalisa iiHacks ezi-2 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
UKUJONGA 2 IZIKHONO
Abantu bayalithanda ikamva lesi-2, yiyo loo nto i-Gamepron ibonelela nge-Destiny 2 Hacks efanelekileyo kwi-Intanethi. Eyona Destiny 2 Aimbot, ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil!
Sele uyithengile iHacknite Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge i-Destiny 2 hacks, qiniseka ukuba isixhobo osikhangeleyo ukuba usithengile sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu I-Destiny 2 Hacks
Ukutshabalalisa iiHacks ezi-2, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga I-Destiny 2 IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ujonge ukuthenga ukukhohlisa kukhetho lwethu olubanzi lwezihloko
Chonga ezona zinto zilungele iimfuno zakho kwaye uzikhethe, sinezinto ezininzi!
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iprosesa yethu ekhethekileyo kunye ne-100% yenkqubo yokuhlawula ekhuselekileyo
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela i-Destiny 2 Hacks!
Emva kokufumana ukufikelela kwisitshixo semveliso unokukhuphela iihacks zakho kwangoko!
Kutheni usebenzisa i-Gamepron Destiny 2 Hacks?
Ngu-Cooper Hollmaier-Uhlaziywe ngoJulayi 7, 2021
Uhlaziyo lokugqibela kwiDestiny 2 yaqala iSolstice yeeHighes kwiNqaba ekubhiyozeleni uloyiso kwiVex. U-Eva Levante utyelele iNqaba kwaye unikezela ngeempahla zakhe kuye nakubani na ofuna izixhobo. Izixhobo azibonisayo zinemixholo esekwe kwiklasi kwaye nganye inokukhanya kwayo.
Ngokuqala kweXesha leSplicer, iNqaba yaphoswa kubusuku obuhlala ixesha elide, kwaye iVex lutshaba oluphambili oya kuzifumana ujongene nalo. Kutshanje, iVault yeGlass yavulwa kwakhona, ivumela abagcini ukuba baphinde bajongane nezoyikisayo zokuhlaselwa kwe-Destiny 2.
I-Destiny 2 sisavenge sesibini sefranchise ethandwa kakhulu, ekuthiwa ibinguye "oza kungena ezihlangwini" zikaHalo (abantu abanokuphikisana ngazo, kodwa kulungile). Into ephambili ekufuneka uyikhumbule malunga ne-Destiny 2 kukuba iya kuba kukugaya, ke nokuba ukuyo izixhobo ezimangalisayo okanye izikhumba ezinqabileyo, konke ukuphanga okufumanayo kuya kunikwa kuwe ngokusila. Kubonakala ngathi imidlalo yevidiyo ijolise kwicandelo lokusila kwezi ntsuku, njengazo zonke ezinye izihloko esiziphuhlisayo zokukhohlisa ziya kufuna umsebenzisi ukuba azigaye - iindaba ezimnandi zezokuba sinciphise ixesha olichithe usila i-Destiny 2 Nokuba uyonwabile ngomdlalo, kuya kubakho indawo apho uya kugula khona, kwaye kulapho iDestiny 2 Hacks kunye neCheats ingena khona!
Ungasebenzisa onke amanqaku aphunyezwe ngaphakathi kwi-Destiny 2 Hacks ukuphumelela imidlalo emininzi, nokuba ucwangcisa ukudlala iPvP ixhomekeke kuwe. Abanye abantu baya kudlula kwikhondo labo le-Destiny 2 ngaphandle kokudlala umdlalo omnye kwi-Intanethi, kodwa kwanabo bagxile ekugayeni ngaphandle kweintanethi baya kufumana uthumo oluthile phantse lube yinto engenakwenzeka. Olona kuphango luza kutshixwa ngasemva kweminye yemisebenzi ehlekisayo, kulapho iDestiny 2 Aimbot inokukunceda uphumelele.
Nokuba ikwi-Destiny 2 Aimbot okanye i-ESP / iWall Hack ekufuneka siyinikele, uninzi lweempawu zethu zenza ukuba inkqubo iphumelele ngokuthe ngqo yabadlali beDininy 2. Nokuba awunakho ukubanakho kwendalo abanye abadlali be-gamers abanako, unokuthembela kukukopela ekukhetheni i-slack- uya kuhlala ukhuphisana nokuba ungubani na. Nokuba zigqithisile kwiintshaba ze-AI okanye abadlali bokwenyani kwi-PvP, ukusebenzisa i-Destiny 2 Hack kuya kukunceda ugqwese ngeendlela ezininzi kunenye.
Njengokuba oko kwakungonelanga, ukukopela kwethu okufumanekayo kuphela yi-100% engafumanekiyo. Inkqubela phambili yakho ayizukuba semngciphekweni xa ukopela i-Gamepron, njengoko ungafuneki ukhathazeke malunga neeakhawunti zakho zohlwaywa ngokukopela. Ukusebenzela yonke le nkqubela phambili ukuze nje uvinjelwe kwaye ubuyiselwe kwisikwere enye yinto esiyiphepha ngokukuko apha kwiGamepron, kwaye sesinye isizathu sokuba sithathwa njengeyona ilungileyo.
Destiny 2 Wall kugula (ESP)
Ukutshabalalisa 2 Ulwazi lomdlali i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Ukutshabalalisa 2 Into ye-ESP eneefilitha
Ukutshatyalaliswa 2 Aimbot
Ukutshabalalisa 2 izilumkiso ezilumkisayo zotshaba
Ukutshatyalaliswa kwe-2 imowudi yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalisiwe).
Ukutshatyalaliswa kwe-2 ithambo kunye neenjongo eziphambili ezilungiselelwe.
Ukutshatyalaliswa 2 Ukubuyisela umbuyekezo
Ngokufanelekileyo I-Destiny 2 yimfumba Iimbonakalo
Ungasebenzisa i-Destiny 2 Player ESP ukugcina iithebhu kuye nakubani na emdlalweni, njengoko ubona imodeli yomdlali we-ESP ngokuma ngokuqinileyo nangokubonakala.
Njengoko unokwenza kwiimodeli zabo zomdlali, ungabona nokuthandwa kwamagama abadlali, banempilo engakanani, kunye nomgama wabo!
Ukutshabalalisa 2 kugcwele ukukhetha kunye nezinye izinto ezinokusetyenziswa, yiyo loo nto ukusebenzisa i-Destiny 2 Item ESP ngezihluzi kubalulekile ukukhumbula.
Awunanjongo intle? Sukuba nexhala malunga nayo, njengoko ikamva lethu le-Aimbot liza kugcina injongo yakho iyinyani kuyo yonke into oyenzayo.
Ukuya kwi-2 track ye-Bullet (esebenzayo kumgama omfutshane kunye naphakathi)
Landa umkhondo wakho wonk 'usebenzisa i-Destiny 2 Bullet Track feature, efumaneka apha kwiGamepron. Ukudubula iintshaba umgama omde akusenguye uqikelelo!
Ingelosi engumlondolozi ihlala ijonge wena nge-Destiny 2 Hack enikwe amandla, njengoko isilumkiso sibonisa umyalezo wesiko ngexesha leengxabano.
Ukutshatyalaliswa kwe-2 imowudi yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa usebenze)
Ungawuphepha umonakalo ngokuwa ngokulula xa usebenzisa i-Gamepron, njengoko iMo Super Jump Mode yakho inokukunceda ukuba ungaphumi xa usiwa kweyona ndawo iphezulu.
Ukutshatyalaliswa kwe-2 ithambo kunye neenjongo eziphambili ezilungiselelwe
I-Destiny 2 Aimbot ekufuneka siyinikezele inezinto ezininzi ezinokuqwalaselwa, ezinje ngokuBekwa phambili kwamathambo kunye nokubulala kwangoko.
Ukutshatyalaliswa 2 i-aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Jonga kwaye uqinisekise ukubulala kwakho ngokusebenzisa ikamva lethu i-Aimbot ene-Check ebonakalayo. Ngoku unokuqinisekisa ukuchaneka kwezixhobo zethu ngokwakho!
Ukuphinda ushiye njalo kuya kuba nefuthe ekuchanekeni kwakho, akunamsebenzi ukuba ubandakanyiwe kumdlalo. Sebenzisa i-Destiny 2 yeHack ukususa ukubuyela kwakhona kwi-equation ngokupheleleyo!
Yiba ngoyena Mdlali ubalaseleyo kwiLizwe liphela
Ukutshatyalaliswa 2 ngumdlalo oya kuzama ukukunyanzela ukuba usile, kwaye bayakwenza oko ngokukuhlambalaza ngamanye amaxesha. Fumana impindezelo obukade ulinqwenela lonke eli xesha ngokusebenzisa i-Destiny 2 Hacks yakho ukubetha inkqubo! Nokuba ucwangcisa ukusebenzisa i-Destiny 2 cheats ye-PvP, Raids, okanye nokuba ungaphandle kweintanethi, yazi nje ukuba singumboneleli # 1 wazo zonke ikamva le-2.
Isiphelo esaziwayo sineeHacks kunye nokukhohlisa
Destiny 2 ESP kunye neWallhack
Okunye Destiny 2 Hacks kunye cheats
Eyona ndawo ithandwa kakhulu yi-Destiny 2 Hacks kunye ne-cheats inokufumaneka apha, kwi-Gamepron! Xa ufuna ukwazi ukuba usebenzisa esona sixhobo siphezulu sinokubakho, kuphela kwendawo onokuthembela kuyo. Ngelixa abanye abaphuhlisi bexhala bexhalabile ngokuguqula inzuzo, ekuphela kwento esijolise kuyo ngumgangatho wezixhobo zethu. Kukho isizathu sokuba i-Gamepron ihlale phezulu kwi "pole totem pole" ixesha elide, kwaye kungenxa yokuba sinika iziphumo. Xa ujonge ukukopela okunxulumene nemidlalo oyithandayo yeGamepron unayo into oyifunayo, kwaye izinto azifani kwiDestiny 2. Singathi sineyona ndawo idume kakhulu ye-Destiny 2 Hacks kunye ne-cheats ezikhoyo kwi-Intanethi, nto leyo ingumnqophiso umgangatho wethu wenkonzo. Sizimisele ngokupheleleyo ukubonelela abathengi bethu ngamava aqinisekileyo, ngaphandle kwenqanaba labo lesakhono. Ngaba ayilixesha lokuba uzive uyimpumelelo esemthethweni ngelixa udlala iDestiny 2?
Ukuba uluhlobo lomntu ofuna ukuphanga okunqabileyo kwi-Destiny 2, kuya kufuneka uyisebenzele. Abaphuhlisi benze umsebenzi omkhulu wokufihla eyona nto iphambili emva kweyona mishini inzima, kodwa akukho nto inzima ngayo nayiphi na loo mishini xa i-Destiny 2 Aimbot inikwe amandla. Awusoze waphoswa ngumfanekiso, kwaye eso sisithembiso- nokuba usila uhlaselo ngaphandle kweintanethi okanye udlala iPvP (Umdlali ngokuchasene noMdlali) ayinamsebenzi, njengoko iDininy 2 yethu iAimbot iza kukunceda uchume nokuba uyintoni na. Ukuchaneka kweefoto zakho kuya kubulala, konke okufuneka ukwenze kukucofa imouse yakho; Kukho neemeko apho ungazukufuna ukuyenza loo nto, njengoko ii-Auto-Aim / Umlilo zikho zombini kwesi sixhobo. Ungafumana kwakhona umsebenzi ongasoze ubulawe wokubulala uKhuseleko ngokufumaneka kwi-Destiny 2 Hack, yenye yezona zinto sizifunayo. Ukulungele ukwenza utshintsho? Thenga isitshixo semveliso kwi-Destiny 2 Aimbot yethu namhlanje.
I-ESP elungileyo (ukuqonda okungaphaya kokuqonda) iya kukunika amandla ongazange wacinga ukuba anokwenzeka. Ayisiyi kuba kuphela kukuthanda kombono weX-Ray (iDestiny 2 Wall Hack), kodwa iDestiny 2 ESP ikwasisixhobo esiluncedo kakhulu sokudibanisa nayo. Ungawabona amathambo / iimodeli zomdlali ngakwindawo eziqinileyo, eziza kukwazisa ngezisongelo ezinokubakho, kodwa yintoni enye ekhoyo? Sebenzisa i-Destiny 2 Item ESP ngesihluzi yeyona ndlela ilula yokufumanisa ukuba leliphi na elona liso liluncedo / izinto ezisetyenziswayo, kwaye ikunika ulwazi oluthe kratya malunga nendawo ekungqongileyo. Ukuba kukho iintshaba ezikufuphi uya kuba nakho ukubona ukuba bashiye impilo engakanani, kunye namagama abo kunye nemipu abanayo.
Zininzi iindlela ze-ESP onokukhetha kuzo, ezenza iDestiny 2 ESP kunye neWall Hack enye yezona ndlela zibhetyebhetye kwiwebhu. Esi sesinye sezixhobo ofuna ukuzibamba ngokubhekisele phezulu, kunjalo.
Ukutsala abantu njengexhoba yinxalenye enkulu yeDestiny 2, njengoko uya kufuna ukufumana ithuba xa kunokwenzeka. Ngamanye amaxesha, oku kuthetha ukuba kuyakufuneka utyibilika kumchasi wakho ngasemva- nokuba ulandela intshaba ngaphandle kwe-Destiny 2 Hacks enikwe amandla, oko akuthethi ukuba uqinisekisiwe ukuba uza kubulala. Ungaphulukana nomkhondo wazo ngaxa lithile, yiyo loo nto uphawu lweFootprint lunokuba luncedo kakhulu. Ayizukulahla umkhondo wethagethi yakho kuphela, kodwa unokusebenzisa umgama omde ukujonga ukuba ukude kangakanani. Xa usondela ngokwaneleyo ukuba ungene ekulweni nemipu, ungasebenzisa inqaku loMonakalo eliPhezulu ukudubula abachasi bakho (ngaphandle kwenqanaba lesakhono1). Nabona badlali babile kumhlaba baya kukuqubuda, njengoko beza kwazi xa bedibene nomdlalo wabo.
Isici soMonakalo oPhezulu yinto engabonakali rhoqo ngaphakathi kwe-Destiny 2 Hacks, ikakhulu kuba kunzima ukuyiphumeza.
Ezinye izinto kunye nezixhobo zinikezelwa kubadlali beDestiny 2 apha kwiGamepron, konke okufuneka ukwenze kukukhusela imveliso yakho. Inqaku elibandakanyiweyo kuyo yonke i-Destiny 2 Hacks yethu ininzi, kwaye kungenxa yokuba sibonile izixhobo ezininzi zikhutshwa ngaphandle kwenani leempawu. Umboneleli omnye unokukhupha i-Destiny 2 Aimbot efanelekileyo, kwaye enye ibe yinto ethembekileyo ye-Destiny 2 Wall Hack, kodwa ayonelanga. Ungazifumana zonke ezona zinto zibaluleke kakhulu kwi-Destiny 2 Hacks kunye ne-Cheats kanye apha kwi-Gamepron, kwaye zonke ziyafumaneka kumgangatho ophezulu onokucinga. Awuyi kufumana ziphumo zokusilela xa ukhetha ukukopela nge-Gamepron, njengoko zininzi kakhulu izinto ekufuneka uziqwalasele!
Ngeempawu ezongezelelweyo ezinje ngeNdlela yokutsiba okuMkhulu, izilumkiso, kunye nokuSuswa, zininzi izinto zokuntywila kumazinyo akho. Ukuthenga isitshixo semveliso kwaye uqalise nge-Destiny 2 cheats namhlanje!
Ukutshatyalaliswa kwe-2 Hacks imibuzo
Kutheni ikamva lethu 2 iHacks
Ufuna ukusebenza ngeDestiny 2 Hacks ekubonelela ngomgangatho ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into, kwaye yile nto kanye oya kuyifumana apha kwiGamepron. Asizikhuphi iihacks ezingazukunceda abasebenzisi bethu ngeendlela ezininzi kunenye, kuba ayisiyondlela esisebenza ngayo! Sinikezela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu nokuba ngowuphi umdlalo esijonge ukubonelela ngawo.
Kutheni ikamva lethu le-2 Aimbot
I-Destiny 2 ye-Aimbot yahlukile ngengqondo yokuba unikwe amanqaku amaninzi ukuba usebenze nawo (xa kuthelekiswa nalawo afunyenwe kwi-Aimbot yesiko). NgokuBulala kwangoko kunye nokuBekwa phambili kwamathambo, kuncinci kakhulu okunokukuthintela ekumiseleni ukuthanda kwakho kwiqela eliphikisayo. Ngokuchaneka ngokucacileyo, uya kuba nakho ukuthatha iintshaba kulo naluphi na uluhlu ngaphandle kokuchitha ixesha.
Kutheni ikamva lethu 2 ESP
Ungayisebenzisa i-Destiny 2 ESP ukugcina umkhondo wolwazi olubalulekileyo kumdlalo, njengamagama omdlali, imivalo yezempilo, nokuba ikude kangakanani. Unokusebenzisa i-Destiny 2 Item ESP ngezihluzo ukuchonga eyona mpahla iphambili kunye nezinto ezisetyenziswayo ezibandakanyiweyo kwi-Destiny 2-awunyanzelekanga ukuba ujikeleze imephu usakhangela kwakhona xa uneGamepron's Destiny 2 Hacks enikwe amandla.
Kutheni ikamva lethu 2 Wallhack
Ilungelo lokungena kwiWall rhoqo lihlala likubeka kwindawo yokuphumelela, kwaye ikamva lethu le-2 Wall Hack alifani. Ungazithemba izixhobo zethu zokugcina ukhuphiswano nangaliphi na inqanaba, kwaye ubanakho ukubona iintshaba kwiindawo eziqinileyo nezintle eziza kukugcina uphila kwiimeko ezininzi. Awuyi kuhamba uye ngqo kwindawo yokulalela!
Kutheni ikamva lethu le-2 Norecoil
Ukuphinda ubuye kuya kuba nefuthe elibi ekuchanekeni kwakho ngexesha lomlo wemipu, onokuthi ulahle. Awuyi kufuna ukuphulukana okanye ukusilela ekuthumeleni ngenxa yokubuyela umva, akunjalo? Yisuse kumdlalo wakho ngokupheleleyo ngokwenza ukuba ikamva lethu le-Destiny 2 NoRecoil kunye nokugcina ukuchaneka ngokuchanekileyo- usenokungafuneki ukwenza iDestiny 2 Aimbot kude kube kamva!
Ungazikhuphela njani ezona hacks zintle ze-Destiny 2?
Unokuzikhuphelela zonke ezona ndawo zibalaseleyo zeHastiny 2 Hacks apha kwiGamepron. Awusoze ufumane omnye umphuhlisi wokuqhekeza oku kugxile kumgangatho wezixhobo zabo, yiyo loo nto sikwazi ukubonelela ngeziphumo ezilindelwe ngabasebenzisi bethu. Esona sisombululo siphezulu se-Destiny 2 sokuSombulula ziyafumaneka kanye apha kwiGamepron, konke ekufuneka ukwenzile kukuthenga isitshixo semveliso kunye nokukhuphela.
Kutheni ikamva lakho le-2 libiza kakhulu kunabanye
Ngelixa abanye bebanga ukuba sinendawo ebizayo ye-Destiny 2 Hack, isenokufikeleleka xa kuthelekiswa nolunye ukhetho lweprimiyamu. Sinenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka abasebenzisi bethu, nto leyo ethetha ukuba wonke umntu akanakufikelela kwizixhobo ngaxeshanye- inqanaba lokukhetha kunye nenyani yokuba izixhobo zethu zingafumaneki kwi-100% sesona sizathu sexabiso lethu.
Kukho imida yexesha ekufuneka ilungele nabani na, njengoko sinikezela ngezitshixo zemveliso ezikuvumela ukuba ufumane ukufikelela yonke imihla, ngeveki, kwinyanga nganye! Ungayisebenzisa i-Destiny 2 Hacks encinci okanye kakhulu njengoko ungathanda, yinto nje yokuthenga isitshixo semveliso efanelekileyo kunye nokukhuphela i-Destiny 2 Hacks yakho emva koko! Ngelixa ixesha linqunyelwe, unokufikelela okungenamda kwii-hacks ngelo xesha.
Kuhle I-Destiny 2 yimfumba Iimbonakalo